Löfven oo damacsan in Ruushka la isku soo dhowaado - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven. sawir: Sawirle: Pontus Lundahl/TT
Löfven oo damacsan in Ruushka la isku soo dhowaado
Löfven: Waa in xiisadda la yareeyo.
La cusbooneeyay måndag 9 januari 2017 kl 12.31
La daabacay måndag 9 januari 2017 kl 08.51
Dawladda Sweden ayaa qorsheeynaysa sidii siyaasad ahaan la isugu dhowaan lahaa dalka Ruushka si loo dhimo xiisadda carriga ka taagan, sida uu kulanka difaaca iyo shacabka ee ka furmay magaalada Sälen uu ka sheegay madaxa dawladda Sweden, Stefan Löfven.
–Caqli la fahmi karo maahan in marka hore xiisadda kor loo qaado dabadeedna taakuleeyn difaac iyo xubin laga noqdo ururka gaashaan-buurta Naato. Waa in lagu dadaalo sidii xiisadda loo dhimi lahaa, sida uu sheegay Stefan Löfven.
Hase yeeshee waxaan jirin tallaabooyin ama fikirro cadcad oo uu madaxa dawladda Sweden soo jeediyay sidii lagu dhimi lahaa xiisadaha aloosan.
–Waa arrimmo loo baahan yahay sidii mar walba looga fekeri lahaa. Halka ay wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström soo dhowayn lahayd kulan ay la yeelato dhiggeeda wasiirka arrimmaha dibadda ee Ruushka Lavrov, sida uu sheegay Stefan Löfven.
Löfven ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in aannu marnaba ka gaabsan doonin dhaleeceeynta tallaabadii Ruushku ku hantiday carriga Kariim oo horay uga tir-sanaan jiray dalka Ukraa’iin, waa sida uu hadalka u dhigay.
– Middaa waannu ku dheggenaan doonaan oo sii deeyn meyno, annaga oo ku dadaaleeyna sidii aannu wada-hadal ula yeelan lahayn.
Stefan Löfven ayaa sheegay inuu welwel ka qabo caqabad kala soo gudboonaata dhanka aaladda internet-ka , mid la mid ah tii loo geeystay dalka Mareeykanka.
– In lagu fekero in middaa laga nabad-gelsan yahay waa fikir aan wanaagsanayn in la qabo. Sidaa daraadeed ayaa loogu baahan yahay in su’aashaa ay mar walba miiska saaran tahay, iyada oo dhanka kale hor-u-marin lagu hayo iska difaacidda arrimmahaa ee aan la dhayal-san. Sidaa daraadeed ayaa loo baahan yahay in arrinka miiska la soo saaro, iyada oo hor-u-mar lagu sameeynayo iska caabinta khatarta noocan kale ah, sida uu sheegay Löfven.
Sweden waa inay kor u qaaddo dhammaan dhinacyadeeda kala duwan ee difaaca, sida uu sheegay Stefan Löfven. Iminkadan wuxuu wada-hadal u socdaa wasaaradda gaashaan-dhigga iyo hayadaha dawladda ee difaaca iyo u diyaar-garowga bulshada iyo sidii loo adkeeyn lahaa wada-shaqeeyntooda.
– Markaa dabadeed ayaa dib u eegis lagu sameeyn doonaa sida ey hayadaha kale ee dawligu gacan uga geey-san kari lahaayeen hor-u-marinta difaaca guud, sida uu sheegay madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven.
Siddeed qodob oo halis ku ah Sweden.